परिवारका कारण चर्चामा रहे तर, बलिउडदेखि परै रहेका सेलिब्रेटीहरू
बलिउड परिवारमा केही यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसले वुबा आमाको बाटो आफुलाई लैजान मानेनन् । उनीहरु फिल्म लाइनभन्दा पनि अरु नै व्यवसाय गर्न रुचाए । उनीहरुलाई फिल्महरुबाट अफर आउँदा समेत फिल्म खेल्न मानेनन् ।
पारिवारिक माहोल पुरै फिल्मी भए पनि उनीहरु यसबाट पर रहन सफल भए । आउनुहोस् केही यस्ता बलिउड सेलिब्रिटीहरुका छोरीहरु जसले आफ्नो करिअर फिल्मी अभिनयमा देखेनन् ।
१. रिद्धिमा कपुर साहनी
ऋषि कपुर र नीतू कपूरकी एक्ली छोरी रिद्धिमाले फिल्मलाइनमा जाने मुड कहिल्यै बनाइनन् । कपुर खानदानका प्राय व्यक्तिहरु बलिउडमा आवद्ध रहेका छन् । तर, उनले फिल्म लाइन छोडेर अन्य व्यवसाय रोजिन् । रिद्धिमा इन्टेरिअर र फेशन डिजाइनर हुन् । उनको आफ्नै ज्वलेरीको लाइन रहेको छ । सन् २००६ मा रिद्धिमा ले आफ्नो बालककालका साथी बिजनेशम्यान भरत साहनीसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
२. श्वेता बच्चन नन्दा
फिल्मी परिवार भएपनि अमिताभ बच्चन र जया बच्चनकी छोरी श्वेता बलिउड देखि पर रहिन् । तर, उनलाई अक्सर फिल्मी पार्टी तथा इभेन्टमा भने देखिने गरिन्छ । श्वेता एक ब्लगर हुन् । उनले सीएनएन र आइबीएन च्यानलमा जोर्नालिष्ट भएर काम गरेकी छिन् । उनले रणवीर कपुरका कजन निखिल नन्दासँग सन् १९९७ मा विवाह गरेकी थिइन् । नाब्याका दुई बच्चाहरु नाब्या नबेली र अगस्त्य रहेका छन् ।
३. सुज्यान खान
संजय खान छोरी सुज्यान खानले ऋतिक रोशनसँग विवाह गरेकी थिइन् । तर, उनी फिल्ममा भने कहिल्यै देखिनन् । फिल्ममा आउनुभन्दा उनले इन्टेरिअर डिजाइनरको कोर्स गरिन् र त्यसैलाई आफ्नो बिजेनेश बनाउने काम गरिन् । बलिउडदेखि पर रहेपनि उनको चर्चामा भने कहिल्यै कमी आएन । उनले धेरै बलिउड सेलिब्रिटीहरुको घरको इन्टेरिअर डिजाइन गरेकी छिन् । सुज्यानका रिदान र रिहान नामका दुई बच्चाहरु पनि छन् । उनको ऋतिकसँग डिभोर्स भइसकेको छ ।
४. सबा अली खान
शर्मिला टेगोरकी कान्छी छोरी सोहाले बलिउड रोजिन् भने उनकी ठुली छोरी भने यस क्षेत्रदेखि पर नै रहिन् । उनी चर्ची ज्वेलरी डिजाइनर हुन् । उनले सुरु देखिनै फिल्ममा काम गर्ने इच्छा देखाइनन् ।
५. अहाना देओल
धमेन्द्र र हेमा मालिनीकी कान्छी छोरी अहानाले पनि फिल्ममा अभिनय गर्ने कुनै इच्छा देखाइनन् । सन् २०१० मा आएको संजय लिला भंसालीको फिल्म गुजारिसमा सह निर्देशक भएर काम गरेकी थिइन् । उनले सन् २०१४ मा बिजनेशम्यान बैभव बोरासँग विवाह गरिन् । सन् २०१५ मा डेरियन बोहरालाई उनले जन्म दिएकी थिइन् ।
६. रिया कपुर
अनिल कपरकी ठुली छोरीले पनि फिल्ममा कुनै इच्छा देखाइनन् । तर, सोनाम कपुरले भने बलिउडमा आफ्नो स्थान बनाइसकेकी छिन् । रियाले पनि सह निर्देशक भएर काम गरिन् । रियाले निर्माण गरेको फिल्म ‘आयुशा’ बक्स अफिसमा कुनै कमाल गर्न सकेन ।
७. लैला खान
फिरोज खानकी छोरी र फरदीन खानकी बहिनी लैला खान पनि बलिउडदेखि पर रहिन् । उनी पेन्टीङ आर्टिस्ट हुन् । उनले विश्वका विभिन्न ठाउँमा एक्जिभिसन गराएकी छिन् । लैलाले पहिलो विवाह सन् १९९८ मा रोहित राजपालसँग गरेकी थिइन् । तर, पछि उनीहरु अलग्एिका थिए । सन् २०१० मा उनले फरहान फर्नीचरवालासँग विवाह गरिन् ।
८. शाहान भट्ट
महेश भट्ट र सोनी राजदानकी ठुली छोरी शाहीन भट्टले आफ्नो बलिउड करिअर सह फिल्म निर्देशनमा देखिइन् । उनले फिल्म ‘राज ३’ फिल्म ‘जिस्म २’ मा सह निर्देशक भएर काम गरिन् । तर, फिल्ममा उनी भुमिका गर्ने पक्षमा भने उनी छैनन् ।